Paska eo am-pijerena ny tontolo politika eto Madagasikara
2009-04-12 @ 21:58 in Finoana
Tonga tamiko teo ampamakiana ny Soratra Masina fanao isan-kalina ato an-trano ity abosako ity. Iarahantsika rehetra mahalala fa mandia Paska isika ary eo amin'ny kristiana ny Paska dia mitory ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty rehefa novonoina noho ny helotsika izy ho fanavotana antsika mpanota. Fototra iorenan'ny finoana kristiana izany fa tsy mitaky fanaporofoana sintifika tsy akory. Tsoriko mialoha fa tamin'ity taona ity aho no kamo indrindra nanatrika fotoam-pivavahana fa in-4 no tsaroako raha mpandeha kosa aho isaky ny tonga ny alahady. Ny alahady voalohan'ny taona, alahady fandraisana iray, mariazy vao notontosaina tamin'ity volana ity (nisy fandraisana koa) ary ny tamin'ny alakamisy masina, dia azonareo an-tsaina ihany koa fa tsy nankany ampiangonana aho tamin'ity alahady paska ity. Marihiko kosa fa nampianatra sekoly alahady matetika ihany aho na dia izany aza fa mody hatrany rehefa vita ny fampianarana.
Lasa ny saiko tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty (Nitsanganany ho velona indray) araka ny voalazan'ny "Soratra Masina". Nanao ahoana ny fihetseham-pon'ny mpianatra rehefa nahita ny Tompo izy ireo? Fihetseham-po telo no tena nisongadina: ny tahotra, ny fahagagana ary ny hafaliana. Nialoha izany dia nisy aloha ny tranga vitsivitsy nosoratana hampiorenana ny finoan'ny kristiana tamin'izany fotoana izany. Teo ireo vehivavy nihevitra ny hanosotra menaka manitra ny fatin'i Jesoa, fa tsy vita izany fombafomba izany noho ny hamehana. Tsy vita io fikasana hanaovana adidy amin'ny maty io satria zavatra hafa no niandry azy ireo, nisy olona (anjely) naniraka ireo vehivavy ireo hilaza amin'ny mpianatra (ny apôstôly indrindra indrindra) fa efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, nisy ny nandositra ka tsy nilaza tamin'ny na iza na iza ny zaatra nitranga, nisy kosa ny nidodododo nankany amin'ny mpianatra tokoa... marihiko fa izay araka ny voasoratra ihany no lazaiko fa tsy mijery lafiny hafa velively aho eto. Tsy nino ireo mpianatra ireo rehefa nilazana, na raha amin'ny fitenintsika tia manafangaro fiteny dia hoe "tsy possible" izany hoy ny tenin'ny mpianatra. Nisy ihany koa ireo hafa niresahan'ny Tompo teny an-dalana hankany Emaosy ka tsy tonga saina raha tsy efa nanjavona indray ny Tompo. Fa ny tena azo nasongadina aloha araka ny famaky ao amin'ny Filazantsara dia ny vehivavy no nahita maso ny Tompo voalohany.
Noho ny fahakiviana lalina tao amin'ireo mpianatra ireo angaha dia lasa tsy ninoany izay rehetra nilaza tamin-dry zareo fa efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, ny nampihomehy aza moa ny fitadiavana porofo, araka ny voasoratra dia ny fijerena ilay vata-mangatsiaka tany amin'ny nandevenana azy. Mazava loatra fa ny tsy fahitana ny faty tsy voatery hidika velively fa niala teo izy fa mety hidika ihany koa hoe noesorina teo amin'ny toerany ny faty na nangalarina ny faty. Nihazakazaka nankany amin'ny porofo tsy naharesy lahatra izany ny mpianatra fa tsy niankina velively tamin'ny filazan'ny namany nilaza ho nahita Azy. Be tamin'ny mpianatra (raha tsy izy rehetra mihitsy aza) no tsy nino izay filazan'ny namany fa i (Masindahy) Tomasy irery no toa asongadin'ny olona ho tsy nanana ilay finoana noho ny fahasahiany niteny hoe raha tsy tena mifandray mihitsy ny tananay tsy mino izay lazainareo aho angamba?
Fa rehefa nipoitra teo anivon'ny mpianatra amin'izay i Jesoa, nanao ahoana ny fihetsiky ny mpianatra? Angaha tonga dia nihorakoraka hoe "Haleloia! Haleloia!" ry zareo? Tsia, tahotra no voalohany indrindra tao anatin'izy ireo, dia izay vao hagagana miharo hafaliana! Mety ho nisy horaka tao anatin'izany hafaliana sy hagagana izany nefa mety ho tsy nahaloa-bava koa ireo olona ireo, fa tsy nosoratana aloha ny tahaka izay. Ny nosoratana dia hoe nisy ny niankohoka ary nisy ny tsy nahahetsika fa ny nasetrin'i Jesoa azy ireo kosa araka ny voasoratra dia ny nanome tsiny noho ny tsy finoana izay nolazain'ny namana aloha sy ny fanirahana azy ireo hanambara izany fitsanganana izany amin'ny hafa ihany koa. Fehiny, araka ny fijeriko azy; tsy tonga dia fetim-pifaliana isiana horakoraka be izany fotoana nitsanganan'ny Tompo sy nihaonany tamin'ny mpianatra izany fa fotoana mampangitakitaka mbola feno tsy fahatsiarovantsaina tsara. Miandry fotoana vitsivitsy vao resy lahatra tanteraka tamin'ny fitsanganany ireo mpianatra ireo, nefa tsy niara-nonina hita maso mivantana mandrakizay tamin'ny mpianatra ny Tompo fa niseho taminy matetika fotsiny... Araka ny finoana Kristiana moa dia ny Fanahiny izay mitoetra ao anatin'ny mpino no miara-dalana aminy aty aoriana.
Fa inona no ifandraisan'izany amin'ny tontolo eto Madagasikara amin'izao fotoana? Voalohany aloha, Ravalomanana tsy Jesoa velively ary tsy mety loatra noho ny finoana ny mampitovy ilay olona sy ilay Tena Olona. Ny toe-java-misy ankehitriny fotsiny no nampitodika ahy handinika tsara ny vanim-potoanan'ny nidinan'ny Zanak'Andriamanitra tety an-tany. Faharoa, aleo aho aloha hatory amin'izay fa mbola hifoha maraina hitsangatsangana fa dia mba mitsako fotsiny ny tsirairay.
jentilisa 12 avrily 2009 amin'ny 23:58